Fiofanana ho an'ny mpiasa - King Lion Limited
1. Fiofanana manokana Drafitra
Manana rakitra fampiofanana tanteraka ho an'ny mpiasa rehetra izahay, mampiseho izany ny zavatra rehetra tokony ho fantatry ny mpiasanay. Fahalalana sy fahaiza-manao inona no tokony hananany mba hahombiazany amin'ny asany?
2. Fivoriana fampiofanana tsy tapaka
Mampiofana fivoriana ho an'ny mpiasanay izahay matetika. Ny fampiofanana matetika dia afaka mitazona fahaizana sy fahalalana. Ny fotoam-pivoriana tsy tapaka koa dia fomba iray lehibe hampianarana fahaiza-manao mandroso kokoa ary hampandre ny mpiasa amin'ny fanovana rehetra.
3. Mampiasà mpiasa ho mpampiofana
Mampiasa mpiasa tena mahay izahay ho mpampiofana tsara indrindra.
Ireo olona ireo no mahavita ny asany ara-potoana sy marim-pototra. Mety ho mpitantana izy ireo. Na, amin'ny fikambanana fisaka, mety ho mpiasa matoky tena fotsiny izy ireo.
Angatahinay izy ireo hampita ny fahaizany sy ny fahalalany amin'ireo mpiasa hafa. Afaka mampiofana mpiasa vaovao izy ireo na mampianatra taranja fiofanana mitohy. Homena azy ireo fampahalalana mahazatra hampianarina izy ireo, na avelantsika izy ireo hamorona fitaovam-piofanana ho azy ireo.
4. Mpiasan'ny Train Train
Mampianatra ny mpiasanay hanao asa hafa ao anatin'ny orinasanay koa izahay. Ny fampiofanana miampita dia mety hanampy ny mpiasa hanao ny asany voalohany. Mety hahazo fahaiza-manao azon'izy ireo ampiharina amin'ny asany izy ireo. Ary, fantatr'izy ireo kokoa izay antenaina amin'ireo mpiara-miasa amin'ny toerana hafa.
5. Mametraha tanjona kendrena
Hamarininay raha mandeha ny fandaharam-pianarantsika. Mba hanaovana izany dia mametraha tanjona ary araho raha efa nihaona izy ireo na tsia.